Sawirka: Si toos ah uga soo degso Sawirada Bilaashka ah Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Pictura: Si toos ah uga soo dejiso sawirrada bilaashka ah 'Photoshop'
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo helo sawirada ugu haboon ee looga shaqeyn karo mashaariicdeena Adobe Photoshop. Dhawr jeer ayaanu kuu soo bandhignay xulashooyin dhowr ah oo ah bangiyada sawirada iyo ilaha internetka, si kastaba ha noqotee waxaa kale oo jira kale oo aad u xiiso badan oo lagu heli karo qalabka aan raadineyno. Beddelkaani waa plugins ama waxyaabo lagu daro oo aan ku dari karno codsigeenna. Sawirka waa xalka saxda ah ee lagu quusin karo inta udhaxeysa bangiyada sawirada ee shabakada adigoon ka tagin muuqaalka Adobe Photoshop. Qalabkani wuxuu naga caawin doonaa inaan helno dhammaan noocyada sawirada si bilaash ah wuxuuna la jaan qaadayaa labada PC iyo Mac, in kastoo haa, kaliya nooca ugu dambeeya ee Photoshop: CC.
Shaki la'aan, waa aalad aad u xiiso badan in lagu xisaabtamo gaar ahaan kuwa naga mid ah ee dhowr saacadood qaata maalintii la shaqeynta arjiga.
Sidee u shaqeysaa?
Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad soo dejisaa sheyga oo aad ku rakibtaa Photoshop. Mar alla markii aad ku darto arjiga, waan soo dejisan karnaa sawirro iyada oo aan la helin wax ka mid ah carqaladeynta ay raadinta iyo soo dejinta gacanta ku bixiso. Ayadoo la adeegsanayo Pictura waxaan isla markiiba heli karnaa oo adeegsan karnaa sawir kasta oo ka yimaada Flickr. Kadib markaan raadino raadintayada oo aan helno sawirka aan raadineynay, waxay unoqon doontaa uun wax riixid iyo shaqo bilaabid.
Raadin sax ah
Waxay sidoo kale na siineysaa suurtagalnimada in lagu nadiifiyo raadintayada iyadoo la adeegsanayo qalabka shaandheynta oo leh xulashooyin kala duwan Waxaan ku raadin karnaa sawirrada liisanka iyo xuquuqda daabicista. Pictura waxay si fudud uheli kartaa sawir kasta oo Flickr ah ilbiriqsiyo maadaama ay isticmaasho Flickr API. Maxaan kaloo weydiisan karnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Pictura: Si toos ah uga soo dejiso sawirrada bilaashka ah 'Photoshop'
Aad u faa'iido badan!
Jawaab Mauro Ramos
Waxaa jirtay waqti dadku si naxariis leh ugu sheegaan ilaha ... :)
Ha daabicin, laakiin yeynaan iska dhigin caadooyinka caafimaadka qaba ...
Sawirada Classic 3D ee daabacan waxay u ogolaanayaan indhoolayaasha inay "arkaan" shaqooyinkan caanka ah markii ugu horeysay
20 nooc oo quraafaad ah oo naqshadaysan